Kubatsira kweInduction Heating, DaWei Induction Heating Equipment
Ndezvipi zvinobatsira zvekutengesa kupinza, kusungurudza, kuoma, kunyunguduka nekugadzira, nezvimwewo?
Sei uchida kushandura kupisa pamusoro pemurazvo wakazaruka, kutenderera, kupenya kana imwe nzira yekupisa? Heano mhedziso pfupi yezvakakosha zvikuru iyo nhasi yakasimba hurumende inopisa inotengeswa inopa hupfumi hwekugadzira:
* Kupisa Zvishoma
Induction Kutya inosundwa mukati mechikamu pachayo nekuchinjisa magetsi emagetsi. Nekuda kweizvozvo, chigadzirwa warpage, kumonyanisa uye kuramba mareti anoderedzwa. Zvepamusoro pehunhu hwechigadzirwa, chikamu chinogona kusarudzika mukamuri yakavharirwa ine vharumu, inert kana kudzikisira mhepo kubvisa zvinokonzerwa neiyo oxidation. Mitengo yekugadzira inogona kuwedzerwa nekuti induction inoshanda nekukurumidza zvakanyanya; kupisa kunogadzirwa chaiko uye pakarepo (> 2000º F. mu <1 sekondi) mukati mechikamu. Kutanga kuri kuita ipapo ipapo; hapana kudziya kana kutonhora pasi kutenderera kunodiwa. Iyo yekudziisa kudziya maitiro inogona kupedzwa pane yekugadzira pasi, padyo nechando kana inopisa inogadzira muchina, pachinzvimbo chekutumira mabatch ezvikamu kunzvimbo iri kure yevira nzvimbo kana subcontractor. Semuenzaniso, yebrazing kana yekunamatira sisitimu iyo yaimboda nguva inopedza nguva, isiri-mutsetse batch yekudziya nzira inogona kutsiviwa neinoenderera, imwe-chidimbu kuyerera yekugadzira system.
* Kuchenesa Kubatana
Induction Kuchenesa kunobvisa kusagadzikana uye nyaya dzakabatanidzwa
nemurazvo wakazaruka, chando chekudziya uye dzimwe nzira. Kana imwe nzira yakanyatsogadziriswa uye yakagadzirirwa, hapana basa rokufungidzira kana kuchinja; iyo inotonhorera inodzokorora uye isingagumi. Nemazuva ano masimba emamiriro ezvinhu, kunyatsogadzirisa kutarisa kwekushisa kunopa maitiro akafanana; simba rinogona kuvhara kana kuvhara pakarepo. Nevhavha yevhavha yekudzivirira yekutonhora, yakasimudzwa induction heat systems vane kugona kuyera tembiricha yechikamu chega chega. Yakananga kukwira kumusoro, bata uye kukwirisa pasi mitengo inogona kusimbiswa & dhata inogona kurekodwa kune yega yega chikamu inomhanya.
* Kuchenesa Kuchena
Induction Kuchenesa mafashoni usapisa zvipfeko zvemafuro; kuderedzwa inzira yakachena, isingasvibisi iyo inobatsira kuchengetedza nzvimbo. Chirongwa chekudzidzira chinowedzera mamiriro ekushanda kune vashandi vako nokubvisa utsi, kupisa kwemafuro, kupisa kunotyisa uye ruzha rukuru. Kupisa kwakachengeteka uye kunobudirira pasina ruvhiri rwakazaruka kuisa pangozi munhu anofambisa kana kuvhara dambudziko racho. Zvisiri-conductive zvinhu hazvibatsiri uye zvinogona kunge zviri pedyo pedyo nenzvimbo yekupisa kunze kwekukuvara.
* Chengetedza Simba
Kuneta kwezvikwata zvinowedzera kushandiswa? Izvi zvinongorongedza simba-inogadzirisa inoshandura kusvika ku90% yemasimba anoshandisa simba kuti ive inopisa; Bhatiki mavhiri anowanzova 45% simba-rinobudirira. Uye sezvo kuburitswa kunoda kuti usashamwaridzana kana kuti kupera-kunyura, kumira-nekupisa kurasikirwa kunoderedzwa kusvika kusina zvishoma. Kudzokorora uye kusagadzikana kwekugadziriswa kwekugadzira kunoita kuti ienderane zvikuru nemagetsi anogadzirisa maitiro.
zvinyorwa zvekupisa kwekuchera